Ndiri musikana ane makore 17 okuberekwa uye ndinotsvagavo shamwari | Kwayedza
Ndiri musikana ane makore 17 okuberekwa uye ndinotsvagavo shamwari
10 Apr, 2015 - 00:04	 2015-04-10T17:26:20+00:00 2015-04-10T00:00:36+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 48, HIV positive uye ndinotsvaka shamwarikadzi ine makore 45 zvichikwira akarongeka ari positive seni.Vechidiki kwete, ndoda anoziva hupenyu.Ndifonerei kana kutumira sms pa0733 161 840. Ndatenda hangu.
Ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana mumwe, HIV negative uye ndotsvaga murume ane makore ari pamusoro peangu. Ari pachokwadi ngaandibate pa0778 931 137.
Ndiri murume ane makore 41 ndotsvagawo mukadzi kana musikana ane makore 30 zvichidzika. Nhare yangu 0779 337 086.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 42, ndiri HIV negative uye ndotsvagawo murume ari pachokwadi. Nhare yangu 0776 358 887.
Ndinonzi Lorraine, ndine makore makumi maviri nemasere uye ndiri HIV positive. Ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora kana ane mwana mumwe kana vaviri nekuti ndakamboroorwa asi handina zvangu mwana. Ngaave anoshanda nekuti tozoda kuchengeta vana. Ane makore 30 kusvika 35 ari murefu ngaandibate pa0776 217 411.
Ndine makore 38, ndinotsvaga mukadzi ane shungu nemba ane makore 25 kusvika 35. Vanoda nhare yangu 0772 933 539.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 2 uye ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichikwira. Ndinoda ane rudo, anoshanda. Anenge andifarira anofona pa0779 365 584.
Ndiri murume ane makore 34 ndiri kutsvaga mukadzi anoda zvemba achitya Mwari. Mondibata pa0777 475 665 asindoda anovimbika.
Ndiri mukomana ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 32 zvichidzika ari HIV negative. Ndinoda anonamata uye anozvishandira. Akavimbika ngaandibate pa0739 293 983.
Ndiri musikana ane makore 17 okuberekwa uye ndinotsvagavo shamwari (penpals). Nhare yangu inoti 0775 862 640.
Makadini veKwayedza? Ndakambotumirawo sms asi handisati ndawana andinoda. Ndine makore 29 uye ndinodawo mukadzi mukobvu. Nhamba yangu 0779 337 120.
Ndiri musikana ane makore 23 ndinonamata uye ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 kusvika 30. Ngaave ari pachokwadi anotya mwari uye anoshanda. Ini ndinoita mabasa emawoko, nhare yangu 0739 537 169.
Makadini veKwayedza? Ndinotsvagawo mukadzi wezera rangu anoda kuroorwa. Ndine makore 37, nhamba dzangu 0772 775 072.
Ndiri mukadzi ane makore 33, ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichikwira. Ndiri HIV positive uye ndine vana 2. Ndibatei pa0773 320 094.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 20 asina chirwere. Akazvipira kupinda cheche yepositori ngaafone pa0771 234 966.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 29 nevana 2, ndiri kutsvagawo murume anondiroora asi vane vakadzi vavo handidi. Andifarira ngaandibate pa0782 352 126.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvaka mukadzi anoshanda asingarwari anogara muHarare, Mutare neMasvingo. Anondibata pa0715 208 084.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana mumwe uye ndinoda murume ari pachokwadi ane makore 23 kusvika 30. Vanoda ndibatei pa0782 286 795.
Ndiri mukadzi ane makore 37 uye ndiri kutsvaga murume ane makore 38 – 45 ane rudo nemwoyo wakanaka. Vanoda fonai pa0775 687 551, zvimwe tinozotaurirana .
Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana mumwe, ndinotsvaga murume ari pachokwadi anoda zvekuroora ane makore 30 zvichikwira. Ngaave anonamata uye vakaroora musazvinetse zvenyu.
Nhamba dzangu 0779 272 560.
Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndiri kutsvagawo shamwarirume iri pachokwadi, inoshanda uye iri HIV negative. Ndibatei papa0777 504 860.
Ndiri murume ane makore 36, ndinorarama neutachiona hweHIV uye ndinotsvagawo mudzimai akavimbika anoshanda ane vana vake kana asina. Anondida ngaafone pa0771 445 775.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana mumwe. Ndinotsvaga murume ari pachokwadi anoda zvekuroora ane makore 30 zvichikwira. Ngaave anonamata uye asingamwe doro. Anoda ngaandibate pa0779 272 560. Vasiri pachokwadi nevakaroora musazvinetse henyu. Ndatenda.
Chekutanga ndinoti makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ndosvakawo shamwari (penpals), kunyanya vasikana vekupanana navo mazano ehupenyu. Vakasununguka fonai pa0783 575 613, ndatenda hangu.
Vachiri kufona pa0783 663 888 ndapota chiregerai ndakaroorwa.
Ndiri kutsvagawo murume ane makore 25 kusvika 40 ari pachirongwa, ndakambonyorera asi ndaisangana nematsotsi. Ndine makore 25 nemwana 1, anoshanda ngaandibate pa0718 141 883.
Ndiri murume anoshanda muHurumende, ndotsvakawo mukadzi anoshanda achigara muHarare. Anoda anondibata pa0715 208 084.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana 1 ndinodawo murume ane makore 30 kusvika 35. Anondida anofona kana kutumira sms pa0782 229 371 chero nguva asi call me back kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18-25 kana mukadzi asina mwana. Ari pachokwad anondibata pa0715 333 859 asi macall back kwete.
Ini ndiri mukadzi ane makore 51 ndiri kurarama neutachiona hweHIV uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 50 — 60 ane utachiona. Ndiri landlord ane zvinhu zvake saka ndinodawo ane mari anonamata asingashushe, kunyanya vashandi vehurumende nekuti vanhu vakarongeka. Ndinoda munhu asina mudzimai, nhare dzangu dzinoti 0718 051 586.
Ndiri mudzimai ane makore 45 uye ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore anodarika angu. Ndinoda ari positive seni asi handina mbereko. Ndinoda vagari vemuHarare, andifarira ngaandibate pa0779 772 725.
Ndinotsvagawo hama dzangu dzekwaChimedza anamuyera Soko. Ndinonzi Godknows, nhamba dzangu 0779 713 855.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 22-26 asina mwana, ndiri murume ane makore 36. Fonai kana sms pa0774 998 209.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 25 zvichidzika akanaka chiso nemwoyo anozogona kugara naamai vangu. Anonyepa handidi hangu, ari pachokwadi ndibatei pa0774 014 366.
Ini ndiri mudzimai ane makore 35 nemwana mumwe ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Ndofarira zvekurima ndiri pamusha uye ndozvishandira. Anenge andifarira ngaandibate pa0773 630 451 asi vane vakadzi vavo kwete.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ari kuda zvemba. Ndiri HIV positive asi handiratidzike kurwara, ndakazvisimbira.
Anoda ngaandibate pa0777 890 330, ndiri muHarare.
Ndiri mukomana ane makore 22 uye ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 -20 anoenda kuchechi. Nhare dzangu idzi 0775 832 243.
lni ndiri murume ane makore 34 nemwana 1 uye ndinoda musikana anoda kuroorwa ane makore 25 – 30 anoenda kuchechi asi kwete kuMasowe. Ari pachokwadi anoda ngaandibate panhamba idzi 0773 298 148.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekurora ari pachokwadi ane makore 20 zvichidzika.
Munofona kana kutumira sms pa0782 829 100.
Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvaga mukadzi ane makore anotangira pa30 kusvika 34 kana ane mwana mumwe chete kana vaviri.
Andifarira anondibata pa0779 523 576.
Ndiri mukadzi ane makore 27 ndinotsvakawo murume ari kuda zvemba. Ndine mwana 1 uye ndiri HIV negative.
Anoda anondibata pa0776 803 512.
Tishamwaridzane14 Dec, 2018